Mpikambana Companies - Ningbo Mechanical Nide Co., Ltd
Armature Insulation taratasy nampidirinay milina
Anja nampidirinay milina
Armature rivotra, mankao milina
Shaft maika milina
Ny fonony maika milina
Commutator maika milina
Commutator toerana welding milina
Armature mahay mampifandanja milina
Armature impregnation varnishing milina
Armature vovoka coating milina
Armature fitiliana milina
Aluminium maty fanariana milina
Stator milina famokarana
Stator insulation taratasy nampidirinay milina
Needle rivotra, mankao milina
Stator rivotra, mankao milina
Stator miolikolika nampidirinay milina
Middle forming milina
Final forming milina
Stator vovoka coating milina
Stator impregnation varnishing milina
Stator fitiliana takelaka
Motor singa fototra
Nide dia manaraka mpikambana ao orinasa
Any amin'ny Hi-Tech District in Ningbo tanàna, ny orinasa foiben'ny an'i Shina izy, dia noraisiny ny tombony azo amin'ny matanjaka ara-teknika sy ara-barotra ekipa, Ningbo Nide Mechanical fitaovana Co., Ltd mifantoka amin'ny ny R & D, varotra & varotra, kalitao fanaraha-maso ary rehefa fanompoana ao amin'ny milina izay novokarin'ny orinasa ny mpikambana (Jiangsu Nide automatique Tech Co., Ltd ary Jiangsu Xiandian Mechanical Co., Ltd.
Ankoatra ny trano ao amin'ny trano milina, maso sy ny kalitao sy ny asa fanompoana rafitra, Nide milina manome ihany koa ny milina sasany outsourced mpanampy amin'ny hafa mpanamboatra matihanina noho ny mpanjifa. Ny tanjona dia ny hampihena ny mpanjifa sy ny asa fanampiny afaka amin'ny fanahiana ny kalitao olana.
Nide manana anjara fanompoana ao India, Brezila, Korea, Torkia, sy Arzantina, tsara ny varotra sy ny asa fanompoana harato mamela antsika hahazo ka manatera fanompoana ny mpanjifa manerana izao tontolo izao mora foana sy haingana. Azo itokisana, andraikitra sy haingana fihetsika fanampiana Nide mba handresy ny maneran-tany mpanjifa 'matoky seccesively, hatramin'izao Nide no nanome vokatra ho amin'ny mpanjifa 40 mahery amin'ny firenena toa an'i Alemaina, Italia, Espaina, Frantsa, Torkia, India, Brezila, Vietnam, Meksika, Agentina, Etazonia, ect, mpanjifa maro no mitarika ny iray ao amin'ny an-tsaha.
Ny faniriany dia ny hanome ny mpanjifa amin'ny optimisé fonosana feno ny vahaolana ho maotera orinasa mpamokatra entana.
2.Jiangsu Nide automatique Tech Co., Ltd
Any in Suzhou, nandrakotra ny faritra atrikasa ny 9.000 metatra toradroa, amin'ny 102 mpiasa, Jiansu Nide automatique-Tech Co., Ltd indrindra ny mpanamboatra milina, ary mijoro eny andalana tanteraka mandeha ho azy ho an'ny induction maotera stator, BLDC maotera rivotra, mankao milina, Fanodina ivelany milina famokarana, Fanodina fivoriambe tsipika, tsipika fivorian'ny maotera sy ny milina na ny famokarana namboarina tsipika.
Ny vokatra dia ampiharina indrindra ho an'ny mpitovo sy dingana telo induction maotera, ny rano paompy maotera, milina fanasan-damba maotera, rivotra ny toe-maotera, mpankafy maotera, hamintinana ireo maotera, herinaratra bisikileta maotera, BLDC maotera, servo maotera, maotera fiara elektrika, sns ny sasany ny vokatra dia nankatoavina tamin'ny taona.
Fampiharana hentitra ny ISO 9001system, fitaovana amin'ny avo machining fametrahana mazava tsara ireo trano, mba hahazoana antoka ny vokatra mba hitsena ny zavatra mpanjifa 'tena ilaina.
3.Zhejiang Nide tsaina automatique Co., Ltd
Zhejiang Nide tsaina automatique Co., Ltd, izay tanteraka tamin'ny tompony Ningbo-Nide Mechanical Equipment Co., Ltd, nipetraka tao an-tanàna Hub indostrialy Ningbo, indrindra fa hifantoka amin'ny farany teknolojia miolikolika sy ny fivoriana rehetra isan-karazany BLDC maotera, anisan'izany ny vato niaraka milina mandeha ho azy, ary feno tanteraka tsipika. Mandritra izany fotoana izany, izahay koa tsy ampanjifaina ny sasany fenitra milina mba cater ho an'ny mpanjifa zavatra ilaina eo amin'ny orinasa mpamokatra entana moto an-tsaha.
Rafitra fanaraha-maso hentitra kalitao, miampy ekipa matanjaka ara-teknika mamela antsika mba hanatitra ny milina azo antoka ho an'ny mpanjifa. Ny filozofia ny "Service, Fiekem, haingana, tso-po" manampy antsika hahazo sitraka ny mpanjifa.
Nide-Just for mora, dia miezaka ny tsy ho mora kokoa maotera mpanamboatra, mpanjifa mora kokoa, fa koa ho avy hamely ny fiainana mora kokoa!
Any amin'ny toerana Hengshan Qiao Toerana mahafinaritra, Changzhou, Jiangsu tokony eran'ny fanjakana sy nandrakotra ny faritra 15000 metatra toradroa, Jiangsu Xiandian Mechanical Co., Ltd dia manokana amin'ny micro-maotera (andian-dahatsoratra milina, DC milina) armature milina famokarana orinasa mpamokatra entana. Izahay, ka mamoaka feno isan-karazany ny armature famokarana mijoro eny milina, ary tanteraka mandeha ho azy armature fivoriambe tsipika, toy ny lavaka maika milina, insulation taratasy nampidirinay milina, armature rivotra, mankao milina, anja nampidirinay milina, commutator fusing milina, commutator nitodika milina, armature mahay mampifandanja milina, armature fitiliana tontonana, stator rivotra, mankao milina, etc.
Ny vokatra indrindra mihatra amin'ny tokantrano fitaovana, fiara, fitaovana fahefana, sns Ao amin'ny orinasa mpamokatra entana milina armature an-tsaha, ny orinasa dia iray amin'ireo mitarika orinasa ao Shina, ary misesy nahazo "Hi-Tech Enterprise" ny governemanta.
Forwards mifindra izahay ...
Nipetraka teo amoron-dranomasina tsara tarehy tanàna-Ningbo, mandray ny tombony azo amin'ny orinasa efa mandroso Hub, tonga lafatra sy mety famatsiana ny fitaterana, ary ny fampidirana ekipa matihanina amin'ny orinasa mpamokatra entana manan-karena traikefa maotera, Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd dia mifantoka amin'ny manome ny samy hafa karazana moto singa ho an'ny mpanjifa.
Ny vokatra dia ahitana commutator, baolina jaza, lavaka, karbonina borosy, insulation taratasy, mpiaro mafana, andriamby, mpankafy, sy ny lamination maotera sarony. Ankoatra ireo vokatra, isika koa dia manome ny asa fanompoana ho an'ny mpanolo-tsaina ara-teknika mpanamboatra maotera, tetikasa fanohanana sy hiverina-key tetikasa.
Noho ny am-polony taona traikefa eo amin'ny maotera orinasa mpamokatra entana an-tsaha, dia tena hahatakatra izay ny mpanjifa marina tinady, manan-danja maotera singa fanamboarana harato asa sy henjana kalitao fanaraha-maso ny rafitra mamela antsika mba hanome ny mpanjifa amin'ny tsara kalitao vokatra amin'ny vidiny mirary, ny tanjona dia ny hanampy ny mpividy mba hampihenana ny fihenjanana eny ifotony mandreraka raha nahazo vokatra tsara kalitao.
Nide maniry dia ny hanomezana World Wide mpanjifa iray-mijanona fanompoana ho an'ny orinasa mpamokatra entana ny maotera. Ho maotera, mitodika any Nide, dia ho mora ny zavatra rehetra!
14-5, East Kemao Center, No.100 Xiangyun Road, Hi-teknolojia District, 315040 Ningbo, Sina.